Shilalekha » चार वाणिज्य बैंकले गरे नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन खातामा कति दिर्दैछ ब्याज ? चार वाणिज्य बैंकले गरे नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन खातामा कति दिर्दैछ ब्याज ? – Shilalekha
चार वाणिज्य बैंकले गरे नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन खातामा कति दिर्दैछ ब्याज ?
३० माघ २०७७, शुक्रबार २०:०७
काठमाडौं । चार वाणिज्य बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । माछापुछ्रे, सनराइज, कृषि र नेपाल बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् । चार वटै बैंकले फागुन १ गतेदेखि लागूहुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कृषि विकास बैंकले साधारण निक्षेप अर्थात बचततर्फ न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म ब्याज कायम गरेको छ । हाल बैंकले विभिन्न १३ वटा बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपाल बैंकले साधारण निक्षेप अर्थात बचततर्फ न्यूनतम २.२५ देखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म ब्याज कायम गरेको छ । हाल बैंकले विभिन्न २५ वटा बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बैंकले कर्जातर्फ होम कर्जामा न्यूनतम ९.४९ देखि १२.४९ प्रतिशत, अटो कर्जामा ९.८५ देखि १२.८५ प्रतिशत, प्रोफेसनल कर्जामा १०.१७ देखि १२.१७ प्रतिशत, एजुकेशन कर्जामा ९.३५ देखि १०.८५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
त्यसैगरी मुद्दति निक्षेपतर्फ ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि न्यूनतम ६.६० प्रतिशतदेखि अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, फागुन महिनाका लागि सनराइज बैंकले पनि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । हाल सनराइज बैंकले १७ प्रकारका साधारण बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
त्यसैगरी स्थिर ब्याजदरतर्फ होम लोनमा १०.५ प्रतिशतदेखि ११.५ प्रतिशतसम्म, एजुकेशन लोनतर्फ ११ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म, सनराइज सजिलो कर्जातर्फ १०।७५ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधारदर ७.२९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी स्प्रेड रेट ४.१० प्रतिशत छ ।